Uyifumana njani yonke imifanekiso-skrini kwi-Mac yethu kwi-Finder | Ndisuka mac
Ungazifumana njani zonke izikrini ezikwi-Mac yethu kwi-Finder
Ukuba sihlala sizinikezele ekubhaleni kwaye sinesidingo sokuthatha izikrini, kunokwenzeka ukuba ukuba asihlali silumkile, iMac yethu iyakuphela ngenani elikhulu lokuthinjwa okusasazwa yiMac yethu. Njengomgaqo jikelele, ngaphandle kokuba yitshintshe, Zonke izikrini esizithathayo zigcinwa ngokuzenzekelayo kwidesktop yekhompyuter yethu.
Emva kwexesha sinokuzigcina okanye siziphelise ukuba azisayi kubakho kwixesha elizayo. Kodwa ukuba uzigcina ukuze zikwazi ukuzisebenzisa kwakhona, kunokuba nzima ukuzifumana ukuba khange sizinike elinye igama ngaphambili. Ngethamsanqa ngoMfumani Singakhangela zonke izikrini ezigcinwe kwikhompyuter yethu.
Ngelixa kuyinyani ukuba kukho iindlela ezahlukeneyo zokufumana zonke izikrini, ngaphandle kokuba sizinike igama elitsha okanye hayi, kweli nqaku ndiza kugxila ekubonakaliseni indlela yokubanakho ukwenza uphando ngendlela elula: nge-Finder.
Kuqala kufuneka uvule i-Finder kwaye uye kwibhokisi yokukhangela. Sinokuya ngqo kwidesktop kwaye ucinezele ukudibanisa iqhosha le-Command + F.
Emva koko sikhetha iMac, ukuze iqhubeke nokukhangela kuyo yonke iMac kwaye kamva kwibhokisi yokukhangela sibhale "kMDItemIsScreenCapture: 1" ngaphandle kwezicatshulwa ukuze i-Finder isibonise ngokuzenzekelayo zonke izikrini ezigcinwe kwi-Mac yethu.
Igama eligcinwe ngesiSpanish yi «Screenshot» Lo myalelo awukhangeli ngegama lefayile, kodwa yindlela esetyenzisiweyo ukuyivelisa.
Ukuba sifuna ukucima yonke okanye inxenye yesikrini esiboniswa nguMfumani emva kokwenza uphando, kufuneka sizikhethe kwaye sizithumele kumgqomo wokuphinda usebenzise kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ungazifumana njani zonke izikrini ezikwi-Mac yethu kwi-Finder
I-CryptoPrice, isicelo esitsha kwabo bane-cryptocurrensets
Ukususela kwiintsuku ezi-1 ukuya kwezi-3. Amaxesha okuhambisa ngenqanawa ii-AirPods ziyehla kwakhona